Icubungula izingxenye ze-Hardware - K-Tek Machining Co., Ltd.
I-K-Tek machining Co., Ltd. itholakala eChina. Inkampani yethu ingenza ngezifiso ukukhiqizwa kwazo zonke izinhlobo zezingxenye zemishini ngokunemba ngokuya ngezidingo zamakhasimende, okwamanje sinabasebenzi abangama-200. Imikhiqizo yethu cishe i-20% ithunyelwe eJapan, i-60% ithunyelwe eYurophu naseMelika, singakunikeza ikhwalithi ephezulu nentengo yokuncintisana.
I-CNC milling isisombululo esisebenza kahle sezingxenye zemishini ezinamajamo anzima kanye / noma ukubekezelelana okuqinile, ikakhulukazi kumaphrojekthi wevolumu ephansi. I-CNC ngokunemba kokugaya ingaveza cishe noma yisiphi isimo lapho okokusebenza kufinyeleleka ngamathuluzi wokusika ajikelezayo. Futhi, uma unezinto ezingezona eziyindilinga noma ezesikwele futhi ezinokuma okuhlukile noma okuyinkimbinkimbi, singasiza. Ngamakhono angaphakathi okwenziwa ngokwezifiso e-inififti, sisebenza ngokukhethekile ekugayeni nasekusebenzeni ngokunemba kwe-hard-to-hold, i-castings enzima yokwenza, i-forgings nezinye izinto zensimbi.
I-K-Tek inikeza ukunemba kwezinsizakalo zokuguqula i-CNC ezinhlobonhlobo zezimboni nezinhlelo zokusebenza. Izinqubo zokuguqula zifaka ukusika, ukubheka, ukuchusha, ukwakha, ukubhola, ukugoqa, nokubhora. Singasebenza ngensimbi, insimbi engagqwali, ithusi, ithusi, ithusi, i-iron, i-nickel, ithini, i-titanium, i-Inconel nokuningi. Futhi singakwazi ukwenza umshini wepulasitiki njenge-ABS, i-Polycarbonate, i-PVC, ne-PTFE. Ubukhulu bezingcezu zomsebenzi buqala ukusuka ngaphansi kuka-1 ”ububanzi kuya kokungaba ngu-10” ububanzi, kuze kufike ku-12 ”ngobude, ngokuya ngengxenye yokumiswa. Thru umthamo we-bore lathes ufinyelela kububanzi obungu-3 ”.
Imishini emihlanu ye-eksisi isivumela ukuthi sihambise ubuciko bokusebenza emaceleni amahlanu ahlukene ngasikhathi sinye. Lokhu kunikeza ukucubungula ngokunemba kwezingxenye eziyinkimbinkimbi kanye namandla okulahla izinto eziningi kuqedile… ngaleyo ndlela kwenze ukusetshenziswa kwalobu buchwepheshe obusezingeni eliphezulu kube nokonga ngokweqile. I-axis emihlanu ye-CNC machining kanye nokugaya okusezinhlangothini ezinhlanu nakho kufanelekile ekufezeni indawo enhle iqeda ngokuya ngokufunwa ngamakhasimende ethu.
Imishini yokuchithwa kwentambo kagesi (i-EDM) ubuchwepheshe obucace bha ukusika cishe noma iyiphi into ehamba ngogesi. Intambo ye-EDM ezacile, efakwe ngogesi efakwe phakathi kweziqondisi ezimbili zemishini yakha i-electrode eyodwa, ngenkathi okusikwayo kwenziwa enye i-electrode. Ukukhishwa kukagesi phakathi kwama-electrode amabili (ucingo nensimbi yokusebenza) kudala izinhlansi ezisika okokusebenza. Ngoba ucingo olushajiwe aluxhumani nakancane nomsebenzi wasemaceleni we-EDM le nqubo ingasetshenziselwa ukwenza izingxenye ezincane kakhulu nezintekenteke ezidinga amazinga okunemba nobucayi imishini yendabuko engenakukufinyelela.
• Ukufafaza iSand / impuphu / Ukufaka i-Galvanizing
• Ukupholisha i-Electro / Tin- Plating / blackening / PVD njll.